मात्रीशोकाको इतिहास, रूसी पुतली | Absolut यात्रा
यदि हामीले आफैलाई सोध्यौं कि सबैभन्दा साधारण स्मारिका के हो जुन हामी रूसको यात्रा पछि घर लिन सक्दछौं भने निश्चय पनि हामी मध्ये अधिकांशले बिना हिचकिचाउने जवाफ दिन्छौं। सबै भन्दा राम्रो स्मृति एक matrioshka हो.
यो संसारको सबैभन्दा लोकप्रिय खेलौना हो, जुन तपाईं सजिलै पहिचान गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईंले पहिले रूस कहिल्यै भ्रमण गर्नुभएको छैन भने पनि। वास्तवमा, उनीहरूको प्रसिद्धि त्यस्तो हो कि मातृवोष्कहरु एक सजावट र फेसन प्रतीक पनि भइसकेका छन। अझ धेरै, तपाईसँग घरमा मातृशोका पनि हुन सक्छ र तपाईले यो कहाँ पाउनुभयो भन्ने कुरा याद छैन।
Matrioshkas एक जिज्ञासु मूल हो र रूसीहरु को लागी एक महान अर्थ जब उनीहरु तिनीहरुलाई उपहारको रूपमा प्राप्त गर्छन्। यदि तपाईंले सँधै यो खेलौनाको ईतिहास के हो भनेर सोच्नुहुन्छ भने, यसको नाम कहाँबाट आउँदछ र यसले के प्रतिनिधित्व गर्दछ, तपाईं यो लेख याद गर्न सक्नुहुन्न जहाँ म यी सबै प्रश्नहरू सम्बोधन गर्छु।
1 मातृविकास के हो?
2 मातृविकासले के प्रतिनिधित्व गर्छ?
3 मातृविकासहरू कसरी हुन्छन्?
4 मात्रीओष्का नाम कहाँबाट आयो?
5 मातृशक्तिहरूको प्रतीकात्मक अर्थ के हो?
6 मातृविकासको इतिहास के हो?
7 मस्को मात्रीओशका संग्रहालय
8 एक matrioshka दिनुहोस्
मातृविकास के हो?
तिनीहरू काठका पुतलीहरू हुन् जसले आफैंको धेरै नक्कलहरू विभिन्न आकारमा राख्छन्।। आमा मात्रीओश्काको आकारमा निर्भर गर्दै, हामी भित्र न्यूनतम and र अधिकतम बीस मात्रियोस्कका बीचमा फेला पार्न सक्दछौं, प्रत्येक विगतको भन्दा सानो। आश्चर्यजनक!
मातृविकासले के प्रतिनिधित्व गर्छ?
मातृविकास रूसी किसान महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछन् र देशको सांस्कृतिक प्रतिमा हुन्।
मातृविकासहरू कसरी हुन्छन्?
मात्रियोस्कस बनाउन, सबैभन्दा बढी प्रयोग गरिने जs्गलहरू ती हुन् जुन एल्डर, बाल्सा वा बिर्चबाट आएका हुन्, यद्यपि अधिक प्रयोग हुने काठ लिन्डेन नै हो।
रूखहरू अप्रिलमा फेल हुन्छन्, जुन उनीहरूमा धेरै जसो भाँडो हुन्छन्, र दैलोलाई टुटाउनबाट रोक्नको निम्ति फलहरू झिकेर त्यसको अन्तिम भागमा कम्तीमा दुई वर्षको लागि वायुित गरिन्छ।
जब तिनीहरू तयार हुन्छन्, सिकर्मीहरूले उचित लम्बाइ काट्छन् र वर्कशपमा १ the चरणमा काठ काम गर्न पठाउँछन्। पहिलो मात्रियोस्का बनाइएको हुन्छ सबैभन्दा सानो हुन्छ।
मात्रीओष्का नाम कहाँबाट आयो?
यस खेलौनाको नाम «मात्रिओना from बाट आउँदछ जुन पुरानो रसियामा सबैभन्दा लोकप्रिय थियो, जुन पछि ल्याटिनबाट आएको हो। मेटर। जसको अर्थ आमा हो। पछि "मात्रीओना" शब्द यस पुतलीको नामकरण गर्न मात्रियोस्कामा अनुकूलित भयो। अन्य पदहरू जुन मात्रीओश्कालाई सन्दर्भ गर्न पनि प्रयोग गरिन्छ ममुष्का र बाबुश्का जस्ता नामहरू हुन्।
मातृशक्तिहरूको प्रतीकात्मक अर्थ के हो?
रूसी मातृसकस प्रजनन, मातृत्व र अनन्त जीवनको प्रतीक हो। भन्नुपर्दा, विशाल र संयुक्त परिवार जहाँ आमाले छोरी जन्माउँछिन्, यो उनको नातिनीलाई, उनी आफ्नो नातिनातिलाई र अनन्त संसारको प्रतिनिधित्व नगरेसम्म।
सुरुमा केवल महिला पुतलीहरू मात्र कुँदेका थिए, तर पछि पुरुष व्यक्तित्वहरू पनि बनाइयो ताकि परिवार पूरा गर्न सकियोस् र फलस्वरूप भाइहरूबीच भ्रातृत्व जस्ता अन्य मूल्यमान्यताहरूको प्रतिनिधित्व गरियो। समय बित्दै जाँदा उनीहरूले रूसी मातृसकस पनि बनाउन थाले जुन ऐतिहासिक वा साहित्यिक व्यक्तित्वको प्रतिनिधित्व गर्थ्यो।
मातृविकासको इतिहास के हो?
यो भनिन्छ कि १ th औं शताब्दीको अन्तमा, रूसी व्यापारी र संरक्षक सव ममोन्टोभ जापानको यात्रामा गए जहाँ उनले एक कलात्मक प्रदर्शनी भ्रमण गरे जुन उनले मातृशोकको पूर्ववर्तीको बारेमा सिकेका थिए। यो सात मूर्तिहरूको प्रतिनिधित्व थियो जुन एक भित्र रहेको फुकुरोकुजु थियो (खुशी र बुद्धिका देवता) सब भन्दा जेठो र एकमा बाँकी रहेका देवताहरू छन्।
ममोन्टोभले यो धारणा राखेका थिए र रसिया फर्किएपछि उनले यसलाई चित्रकार र टर्नर सर्गेई मालिउटिन समक्ष प्रस्तुत गरे ताकि उनले जापानी टुक्राहरूको आफ्नै संस्करण बनाउन सकून्। यस तरिकाले, एउटा पुतली सिर्जना गरिएको थियो जसले एक खुशी रूसी किसानलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो जसले उनको सबै सन्तानलाई स्वागत गर्‍यो।
खेलौनाले १ 1900 ०० पेरिस विश्वको मेलामा सनसनी पैदा गर्‍यो, जहाँ यसले कांस्य पदक जित्यो, र कारखानाहरूले चाँडै नै रूस र देशभर र पश्चिममा मैत्रोष्का उत्पादनका लागि उत्पादन गर्न थाले। यस तरिकाले, यो रूसी संस्कृतिको प्रतीक र देशको सबैभन्दा प्रतिनिधि स्मारिका बनेको छ। प्रत्येक शिल्पकारले आफ्नै पुतलीहरू खोप्दछन् र तिनीहरू ठूलो मूल्यको खेलौना भएका छन् किनकि तिनीहरू कहिलेकाँही सor्कलनकर्ताका वस्तुहरू हुन्।
मस्को मात्रीओशका संग्रहालय
वास्तवमा तिनीहरू यति महत्त्वपूर्ण छन् कि २००१ मा यो मस्कोमा खोलिएको थियो, यो खेलौनाको इतिहास र समयको साथ तिनीहरूको विकासको प्रचार गर्न मात्रीओशका संग्रहालय।
यो स muse्ग्रहालयले केहि पहिलो मौलिक रूसी मात्रियोस्कका प्रदर्शन गर्दछ जुन २० औं शताब्दीको सुरूमा सिर्जना गरिएको थियो र कसरी उनीहरूको डिजाईन बर्षहरूमा परिवर्तन भयो।
उदाहरणका लागि, १ 1920 २० को दशकमा बोल्सेभिक मातृतोकहरूले मजदुर वर्गलाई प्रतिनिधित्व गर्थे र "कुलक" भन्ने शव्दसमेत (जसलाई धनी किसानहरूलाई दर्साउन विचित्र रूपमा प्रयोग गरिएको थियो) पनि टोपी लगाएर पुनरुत्पादित गरिएको थियो र ठूलो पेटमा हतियारहरू पार गरेको थियो।
सोवियत संघको समयमा, सरकारले मातृशियाहरूमा सोभियत अन्तर्राष्ट्रियतालाई मूर्त रूप दिन चाहान्थ्यो र यस पुतलीमा बेलारसियन, युक्रेनी, रूसी आदि जस्ता विभिन्न राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गरिएको थियो। अन्तरिक्ष दौडको साथ पनि, अन्तरिक्ष यात्री पुतहरूको ठूलो संग्रह पनि आफ्नै डाइभि suit सूट र अन्तरिक्ष रकेटको साथ उत्पन्न भयो।
युएसएसआरको अन्त्य पछि, मातृसकसको विषयवस्तु विविध र प्रख्यात राजनीतिज्ञ र विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय हस्तियों को प्रतिनिधित्व हुन थाले।
स of्ग्रहको भ्रमण गर्दै यो सब भन्दा परम्परागत matrioshkas सबैभन्दा आधुनिकसँग तुलना गर्न रोचक छ। साथै उनीहरू dio फुकुरुमा को जापानी आंकडा संग कि तिनीहरू प्रेरित। संग्रहालयले रूसको बिभिन्न क्षेत्रहरुका म्याट्रियोस्का बीचका भिन्नताहरू पनि देखाउँदछ र रूसी म्यात्रोष्का शिल्पकार र चित्रकारहरूको जीवन र क्यारियरको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ।
एक matrioshka दिनुहोस्
रसियनहरूका लागि यसको म्यात्रयौस्कालाई उपहारको रूपमा दिनु ठूलो अर्थ हो। जब कसैले यी मध्ये कुनै एक पुत्रालाई उपहारको रूपमा प्राप्त गर्दछ, तिनीहरूले पहिलो मात्रियोस्का खोल्नु पर्छ र इच्छा गर्नु पर्छ। एकचोटि यो पूरा भएपछि, तपाईं दोस्रो गुडिया खोल्न सक्नुहुन्छ र अर्को नयाँ इच्छा बनाउन सक्नुहुन्छ। पछिल्लो र सबैभन्दा सानो म्याट्रियोस्का पुगे सम्म।
सबै मेट्रियोस्कहरू एकपटक खोलिए पछि, जो कोहीले पनि यो उपहार प्राप्त गरेको हो उसले यसलाई वंशजलाई प्रतीकको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्दछ कि तिनीहरू गुँडबाट उडिरहेका छन्। सुरुमा यो महिलाहरूले गरेका थिए। केवल तिनीहरू घरहरूको रेखदेखमा थिए र अन्ततः उनीहरूका बच्चाहरूलाई मातृशोकहरू पुर्‍याउन इच्छा गर्न सक्थे।
यसैले यदि कसैले तपाइँलाई एक मातृोश्का दिन्छ, रूसी संस्कृतिमा भनिन्छ कि उसले तपाईंलाई आफ्नो खेलौनाको रूपमा माया र स्नेह प्रदान गर्दैछ।
यदि अर्कोतर्फ, तपाईं एक हुनुहुन्छ जो एक उपहार को रूपमा एक matryoshka दिन गइरहेको छ, यस विवरण दिनुको साथ साथै, तपाईं गर्न सक्नुहुने उत्तम कुरा भनेको प्राप्तकर्तालाई उपहारको अर्थ र इतिहास बताउनु हो जुन तपाईंलाई थाहा छ अब यो। यस तरिकाले, उसले उपहारलाई अधिक महत्त्व दिनेछ र पछिल्लो र सानो म्यात्रोष्कालाई के गर्ने भनेर जान्ने छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Absolut यात्रा » मात्रीशोकाको इतिहास, रसियन गुडिया
सर्वश्रेष्ठ बलिउड अभिनेत्रीहरू